Shixnad heesaha Shiinaha | Shirkadaha Helical gearbox ee Shiinaha | Wax soosaarka & Qaybinta Helical gearbox ee Shiinaha
Shixnad heesaha Shiinaha | Shirkadaha Helical gearbox ee Shiinaha | Shirkadaha Helical gearbox ee Shiinaha
XL Sanduuqa Helical, Waxaan leenahay qalab geelleel tayo sare leh oo ku jihaysan xagal usheeda dhexe. Tani waxay kordhisaa awoodda qaadista xamuulka qalabka. Jihaynta xaglaha ah waxay sidoo kale ka caawisaa geerka inay u shaqeeyaan oo ay si habsami leh u shaqeeyaan. Tani waxay gacan ka geysaneysaa yareynta xaddiga buuq dhaca, sidaas darteedna waxay sanduuqeena gear-ka ka dhigaysaa mid aamusan.
Ahaanshaha ugu horeysa ee soo saareyaasha gearbox-ka Shiinaha, waxaan aqoonsannahay dhibaatooyinka firfircoon ee ka jira gudaha. Kuwani waxay ku daraan hawlgal xasilloon, qaabeyn adag, rar ballaaran, koronto xoog leh, waxtarka ugu sarreeya, iyo kalsooni.
Qalab kasta oo XL ah oo geelleel ah ayaa lagu sameeyaa kormeer tayo sare leh oo adag si loo hubiyo tayada ugu fiican ee alaabtayada. Dhammaan qalabka waxay u hoggaansamaan DNV-ISO 900: 2008, SGS, iyo CE shuruudaha wanaagsan. Sidoo kale, waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo taxane ah oo taxane ah oo loo yaqaan 'china he gear gear gear' sida G, R, F, K, iyo S. Xinlan waa mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu kalsoonida badan Helical Shirkadaha Gearbox ee Shiinaha.
Qalabkayaga Helical wuxuu u shaqeeyaa si habsami leh oo aamusnaan ah marka la barbardhigo qalabka wax lagu duubo iyo sanduuqyada kale sida habka ilkuhu ula falgalaan-ilkaha ku yaal qalabka wax lagu duubo ayaa ka hooseeya xagasha kulankaaga qalabka. Marka laba ka mid ah ilkuhu ay bilaabaan inay hawl galaan, qabsashadu waa tartiib tartiib - waxay ka bilaabaneysaa hal ilkeed oo lagu dhammeeyo. Waxay kusii socotaa la xiriirida iyada oo qalabka loo wareejiyo hawlgalka oo dhameystiran. Jaangooyada caadiga ah ee xagasha helix waxay qiyaastii tahay 15 illaa 30 deg. Xamuulka riixista ayaa isla markaaba kala geddisan, iyadoo la adeegsanayo cabbirka taangiga xagal helix. Helical ayaa noqon doonta qalabka sida caadiga ah looga faa ideysto idaacadaha. Waxay sidoo kale abuuraan tiro badan oo riixitaan ah waxayna adeegsadaan jaangooyooyin si ay uga caawiyaan taageerada culeyska riixa. Helical gears ayaa laga yaabaa in loo shaqaaleeyo si loogu beddelo xagasha wareegga 90 digrii markii lagu dhejiyo fallaadho qotoma. Noocyadeeda kala duwan ee qalabka caadiga ah waa saddex: laba illaa toban: mid.
Maxay tahay sababta XL Helical gearboxes?
Qalabkeena Gearbox-yada waxay ku shaqeeyaan aamusnaan waxayna leeyihiin nolol dheer. Iyada oo sanduuqyada 'Helical geares' ay ku habboon yihiin dhowr codsiyo kale, waxay ku siinaysaa tayo wanaagsan laakiin adeegsi wax ku ool ah. Kuwani si fudud ayaa loo qiyaasi karaa marka loo eego shaqooyinka. Naqshadeynta qaabdhismeedka ugu sarreeya ayaa fududeynaya ku habboon meelaha bannaan ee warshadaha. Waxay ku raaxeysataa waxqabadyo kala duwan oo waxqabad ah iyo faa'iidooyinka injineernimada. Hufnaanta tayada waxaa lagu ilaalinayaa qiimo jaban adiga.
Ilkaha xagjirka ah ee sanduuqa 'Helical gearboxes' waxay caawiyaan inay si habsami leh oo deggan u hawlgalaan. XL Helical Gearbox ma aha oo kaliya mid waara laakiin sidoo kale aad u hufan. Waxay ku habboon yihiin in loo isticmaalo codsiyada leh culeysyo badan. Xamuulka ayaa si siman loogu qaybiyaa faasaska dhexdooda, taas oo yaraynaysa halista wax u dhimaya sheyga. Waxaan nahay mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee keena shirkado Helical Gearboxes ah Shiinaha. Iyada oo khibradeena iyo khibradeena, waxaan hubineynaa inaan u gudbino alaabadayada tayada ugu fiican macaamiisheenna. Helical Gearboxes-ka ayaa ah meertada ugu sareysa ee wax soo saar, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay awood u yeeshaan meelaynta iyo dhaqdhaqaaqa saxda ah. Nolosha dheer ee gear-ka waxay xaqiijineysaa nolol adeeg dheer sidoo kale.
Sida horudhac ahaan sanduuqa qalabka heical soo saaraha, ee XL, waxaan aqoonsannahay dhibaatooyinka firfircoon ee ka jira gudaha gudaha. Kuwani waxay ku daraan hawlgal aamusnaan ah, qaabeyn adag, rar ballaaran, koronto xoog leh, waxtarka ugu sarreeya iyo kalsoonida.
Helical Gearbox | Shirkadaha Helical gearbox ee Shiinaha
Mid kasta oo ka mid ah qalabka loo yaqaan 'XL gearbox gearbox' waxaa lagu soo rogay kormeer tayo sare leh oo adag. Dhammaan qalabka waxay u hoggaansamaan DNV-ISO 900: 2008, SGS iyo CE shuruudaha wanaagsan. Sidoo kale, waxaan leenahay xulasho ballaaran shiinaha gear gear taxanaha sida: G, R, F, K iyo S.
Helical gears waxay u shaqeysaa si habsami leh oo xasilloon marka la barbardhigo kicinta geerka natiijada habka ilkuhu u dhexgalaan. Ilkaha qalabka korontada ku shaqeeya ayaa hoos u dhaca xagal u ah kulankaaga qalabka. Marka laba ka mid ah ilkuhu ay bilaabaan inay hawl galaan, qabsashadu waa tartiib tartiib – oo laga bilaabayo hal ilkood oo ilkaha lagu ilaalinayo lana xiriiro iyadoo qalabka loo weecinayo gebi ahaanba hawlgelinta. Jaangooyada caadiga ah ee xagasha helix waxay qiyaastii tahay 15 illaa 30 degre. Xamuulka riixida ayaa isla markaaba kala geddisan iyadoo la adeegsanayo baaxadda taangent ee xagalka helix. Helical ayaa noqon doonta qalabka sida caadiga ah looga faa ideysto idaacadaha. Waxay sidoo kale abuuraan tiro badan oo riixitaan ah waxayna adeegsadaan jaangooyooyin si ay uga caawiyaan taageerada culeyska riixa. Helical gears ayaa laga yaabaa in loo shaqaaleeyo si loogu beddelo xagasha wareegga 90 deg. markii lagu rakibay fallaadhihii toosan. Noocyadeeda kala duwan ee qalabka caadiga ah waa saddex: laba illaa toban: 1.
Marka maxaad sugeysaa? Ku jihaysan iibsiga XL Helical Gearbox hadda.
1. Qalabkan sheybaarka ah ee buugaagta lagu gado ma lagu heli karaa taxane kala duwan?
Haa, Waxaan bixinnaa taxane ballaaran oo Gearboxes ah. Iyada oo ku xidhan shuruudahaaga, waxaan kaa caawin karnaa inaad doorato midka ugu habboon ee ugu habboon.
2. Helical gearboxesyadu waxtar ma leeyihiin?
Haa! Iyagu waa muddo dheer, sanduuqyo dhaadheer oo waara oo hawl ahaan lagu qiyaasi karo. Qalabkaan waxay leeyihiin awood sii kordheysa oo ay ku hayaan culeysyo ay ugu wacan tahay ilkaha xagasha leh.
3. Helical Gearboxesyadu ma sameeyaan buuq badan?
Maya, dhanka kale, Helical Gearboxes ayaa ka aamusan noocyada kala duwan ee gearboxes-ka sababta oo ah habka ilkuhu u dhexgalaan.
gearbox helical, alaab-qeybiyeyaal shixnad shillin ah oo Shiinaha ah, Shixnado heel ah oo Shillin ah, Shiinaha ayaa Shiinaha u kala diraya alaab-qeybiyeyaal